The Orange Knowledge Programme contributes toasociety’s sustainable and inclusive development by providing access to e...
Workshop for Curriculum development for Bachelor course in water studies in University of Yangon
The Orange Knowledge Programme in just over 1 minute
Esther Ayeku reacted to this post about3months ago
Thandar . postedanew blog post in Myanmar - Orange Knowledge Programme
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ပထမဦးဆုံး သဘာဝသိပ္ပံနှင့် လူမှုရေးသိပ္ပံ ပေါင်းစပ်သင်ကြားပေးမည့် ရေဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာခြင်း "Water Studies" ဟုခေါ်သော ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်တော့မည့် အကြောင်းကို သင်သိပါသလား။ ဤသို့ဆိုလျှင် ရေဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာခြင်း "Water Studies" ဆိုတာဘာလဲ။ မည်သည့်သင်ရိုးတွေပါဝင်မလဲ ဆိုတာအခြေခံရှင်းပြပါရစေ။ "နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ...
Orange Knowledge Program - A five-day workshop on Curriculum development for BSc in Water Studies
With the support of NUFFIC Orange Knowledge Program,afive-day workshop on Curriculum development for BSc in Water Studies involved with local and international partners who are keen to share their experience and expertise which are critically required in Myanmar Water Sector....
Myanmar Water Portal uploadedanew video
A short introduction to the Orange Knowledge Programme.
Myanmar - Orange Knowledge Programme changed the cover photo
Thinzar Mon postedanew blog post in Myanmar - Orange Knowledge Programme
"Water Studies" ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ...
"Water Studies" ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခများ၊ဆရာဆရာမများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ နိုင်ငံတကာပညာရှင်များပူးပေါင်း၍ တိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ဤသင်တန်းမှ ထိရောက်သောသုတေသနများ၊ သင်ကြားနည်းစနစ်များ၊ မူဝါဒဆန်းစစ် အကောင်အထည်ဖော်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် သဘာဝ...
Curriculum development for Bachelor course in water studies was discussed together with the professors and directors of...
Curriculum development for Bachelor course in water studies was discussed together with the professors and directors of relevant international partners with Environment and Water Studies (EWS) department of University of Yangon. Their vision is to becomeaCenter of Excellence andaleading scientific and educational resource on various aspects of ...